Ngokuthuthuka kwasekhaya nakwamanye amazwe, izinhlobo ezejwayelekile zama-hose clamp ezimakethe zangaphandle manje sezigcwele, futhi ukusetshenziswa kwama-hose clamp kukhulu kakhulu, ikakhulukazi izinhlobo ezijwayelekile. Kodwa-ke, ngentuthuko yezobuchwepheshe, ikakhulukazi eminyakeni emibili edlule, imakethe yasekhaya isondele ekugcwalisweni, okuholela kumncintiswano onamandla wemakethe. Abanye abakhiqizi balwa ngisho nezimpi zamanani, okuholela ezinxushunxushweni ezikuwo wonke umkhiqizo, okungahambeli phambili ekuthuthukisweni kwemboni yonke. Eqinisweni, kulula ukuqonda isimo samanje ngokuhlaziya isimo samanje Isizathu salesi simo.
Yize ukuqala kwemakethe yezingxenyekazi zekhompiyutha kusenesikhathi, intuthuko esikhathini esizayo ayikwazi ukuqhubeka. Ngokuya ngezinhlobo ezijwayelekile, cishe akunalo igebe ngemikhiqizo yaphesheya. Ngisho nezindleko zokukhiqiza ziphansi, futhi inzuzo yamanani ayikho. Ungenza inzuzo kuphela ngokusho kwenani, ngokuya ngobuchwepheshe obuphambili. Ukuthuthukiswa kwamakethe kwamanje kubangelwa ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bokhiye basekhaya, kepha imikhiqizo ephezulu kakhulu bekulokhu ingenalutho, enganele ukufeza isidingo semakethe.
Igebe lemakethe yamazwe omhlaba likhulu impela. Ukubuyela emuva kwezinqubo eziningi kuholela ekukhuleni kokuthuthuka kwezobuchwepheshe, futhi imikhiqizo ayikwazi ukufeza izidingo zokucacisa eziphakeme zemishini yamanje kanye nobunjiniyela. Wonke amabhizinisi awanakuqagela, kufanele aqinisekise ikhwalithi ephezulu yemikhiqizo yawo, futhi akumele ancintisane kahle ukuphazamisa ukuthambekela komkhiqizo wemakethe. Ukuthuthukisa imakethe yamanje, badinga ukuxazulula izinkinga eziyisisekelo kusuka kwisayensi nezobuchwepheshe. Ngaphansi kwalezi zimo, ukuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe kungenza ibhizinisi libe sesimweni esingenakunqotshwa entuthukweni esheshayo yamanje. Akunobunzima bokusinda, abantu abangafanelekeli kuphela abahoxisa, "emisha" okuyohlala kungumsebenzi oqinile womenzi wethu we-hose!